azetidines Apicmo ndi na-emeputa ihe ndi ozo
ngwaahịa > Azetidines
Azetidine bụ ngwongwo nke heterocyclic jupụtara na ya nke nwere atọ carbon carbon na otu nitrogen atom. Ọ bụ mmiri mmiri dị na okpomọkụ nke ụlọ na-esi ísì ụtọ nke amonia nakwa na ọ bụ isi ihe dị mkpa jiri tụnyere ọtụtụ amines abụọ.
Azetidine na ihe ndị na-emepụta ya bụ ihe ndị na-enweghị ihe kpatara ya. N'ụzọ dị mkpa, ha bụ otu ihe dị mkpa nke acidic acid and peresidines. Ikekwe ụdị azetidine nke kachasị bụ azetidine-2-carboxylic acid, homologic homolog of proline.